4 Talooyinka Caafimaadka Maskaxda ee loogu talagalay Dadka Jecel Weed • Drugs Inc.eu
Bogga ugu weyn cannabis 4 Talooyin Caafimaadka Maskaxda ah oo loogu talagalay dadka xiiseeya haramaha
albaabka daroogada 12 May 2022
maqaal by daroogada 12 May 2022
May waa Wacyigelinta Caafimaadka Maskaxdabil iyo wakhti awood leh oo lagu milicsado caafimaadka maskaxda iyo fayoobaanta shucuureed. Kuwa jecel haramaha, waxaa jira dhowr siyaabood oo aan ku sharfi karno nafteena oo aan ku hubin karno miyirkeenna bishan, iyo bil kasta mustaqbalka.
1 Ku beddel wakhtiga aad ku qaadato baraha bulshada si aad isu baadho
2 Raadi iftiin badan oo qorraxda
3 Runtaada ku noolow
4 Baadh daawaynta oo ha ka cabsan daroogooyinka
Iyada oo ay wax badan ka socdaan adduunka inagu xeeran, waxaa muhiim ah in aan qaadano waqti dheeri ah si aan uga baaraandagno dareenkeena, isku dayno siyaabo cusub oo aan ku dareemo fiicnaan, ama aan ogaanno sababta asalka u ah qaababka aynaan u muuqan karin inaan ka baxsan karno. Tani waxay ku lug yeelan kartaa qiimeynta xiriirka aan la leenahay xashiishadda ama xitaa in aan wadahadal qoto dheer la yeelanno kuwa aan jecelnahay.
Laakiin halkan waa wax yar oo qaswadayaal ah. Mararka qaarkood jawaabta kaliya ee aad ka heli doonto waa in aad tahay bini'aadam leh hormoonno isku dhafan, kiimiko iyo dareen. Qof walba siyaalo kala duwan ayuu nolosha u maareeyaa, waana shaqadaada inaad heshid hababka... caafimaad leh oo noqo mid lagu maarayn karo noloshaada gaarka ah.
Waa kuwan afar siyaabood oo dadka leh qaab nololeedka xashiishadda ay fiiro gaar ah u yeelan karaan caafimaadkooda maskaxeed:
Ku beddel wakhtiga aad ku qaadato baraha bulshada si aad isu baadho
Baraha bulshadu waxay soo dedejin kartaa maskaxdeena iyo shucuurteena marka ay dib u soo kicinayaan waqti. Ma aha in la xuso in warbaahinta bulshadu aysan had iyo jeer ahayn meesha ugu fiican ee xashiishadda. Qiimee inta wakhtiga aad ku bixiso baraha bulshada iyo sida ay kuu dareento. Ha ka baqin inaad nasato mar mar.
Waxaa jira fikrado badan oo ku saabsan waxa waqtigayaga internetka oo dhan uu ku sameeyo maskaxdeena, waana inaan xasuusannaa in aynaan weli ku noolayn Matrix-ka.
Yaraynta wakhtigaaga baraha bulshada waa hab fiican oo aad wakhti ku xorayn karto si aad fiiro gaar ah u yeelato fikradahaaga iyo dareenkaaga - waa hawl aad u fudud haddii aanad haysan ra'yi joogto ah iyo cinwaanno.
Xad u samee taleefankaaga kaasoo ku xasuusinaya inaad nasato ka dib markaad duubto toban daqiiqo ama aad turkiga qabow oo gabi ahaanba ka saar abka. Mana jirto wax khiyaano ah adiga oo ka soo galaya miiskaaga ama browserkaaga!
Isticmaal wakhtiga dheeraadka ah si aad u fikirto, iftiimiso kalagoysyada, iyo ka fiirso, ama akhri dhawr bog oo buug cusub ah.
Raadi iftiin badan oo qorraxda
Tani waa mid aan runtii rajeyneyno in qof walba uu sameyn karo.
Soo hel fallaadho cadceed oo ku dhex jir ugu yaraan labaatan daqiiqo. Waxaad joornaal ku haysan kartaa kursiga keydka, waxaad si ula kac ah u eegi kartaa daaqadda, ku hareeree meel ka mid ah meel ka mid ah oo aad sigaar cabbi karto, ama waxaad ku seexan kartaa roogaga oo aad iska seexataa. Waxa muhiimka ah ayaa ah inaad gasho iftiinkaas weyn, gaaska, xiddigta gubanaya oo aad saameyn fiican ku yeelato caafimaadka maskaxdaada!
Sida qaar badan oo naga mid ah aan ognahay, iftiinka qorraxdu wuxuu ka caawiyaa jirkeena inuu sameeyo fitamiin D iyo a Faytamiin D la'aanta waxay u horseedi kartaa dareenka niyad-jabka† Waxa laga yaabaa inay u ekaato mid fudud, laakiin soo-gaadhistayada qorraxda waxay saameyn weyn ku yeelan kartaa niyaddayada iyo, waqti ka dib, caafimaadka maskaxda.
Raadso iftiin badan oo qorraxda caafimaadka maskaxdaada (afb.)
Daraasaduhu waxay muujinayaan in dadka qaba melaninku ay ku adag tahay inay sameeyaan fitamiin D ku filan, taas oo macnaheedu yahay inaan u baahanahay inaan kala hadalno dhakhaatiirteena siyaabo kale (qorraxda ka sokow) si loo helo fitamiin D-ga habkayaga, sida kaabis maalinle ah.
Si kasta oo aad leedahay melanin, ha ilaawin muraayadda qorraxda.
Runtaada ku noolow
Noloshu waa waalan tahay maalin kasta. Waxay la timaadaa mid sare iyo hoos u dhac, iyo wax kasta oo u dhexeeya. Qaado wakhti aad ku qirato wixii aad soo martay iyo sida ay kuugu qaabaysay qofka aad maanta tahay. Caafimaadka maskaxda ee wanaagsan ayaa aad muhiim u ah.
Go'aan ku qaado waxa adiga kuu wanaagsan, oo yaanu qofna kugu ceebayn inaad ka duwan tahay. La dagaallanka qofka aad dhab ahaantii tahay waxay tijaabin doontaa caafimaadka maskaxdaada - waxaad u qalantaa inaad ku noolaato runtaada.
Haddii aad uga baahan tahay maalin caafimaadka dhimirka shaqada oo aad samayn karto, qaado. Haddii aad u baahan tahay inaad dejiso xuduud adag si aad u gaadho yoolalkaaga, samee. Haddii ay tahay inaad u sheegto qoyskaaga inaad jeceshahay inaad sigaar cabto haramaha stress sayid, ka dibna waa maanta.
Naftaada u oggolow inaad mudnaanta siiso wanaaggaaga hana dareemin dambi inaad leedahay dareen is-xakameyn (xitaa haddii ay kugu dareemeyso wax yar oo qariib ah).
Baadh daawaynta oo ha ka cabsan daroogooyinka
Bulshada xashiishka waxaa ka buuxa noocyo kala duwan oo dad ah. Waxaa jira dad ay ka dillaaceen xamaasad, go'aan, tamar iyo agabka ay u baahan yihiin si ay u hagaagaan. Waxayna sidoo kale ka buuxan dad ay soo mareen dhaawacyo waxayna mudan yihiin dareenka xirfadlaha caafimaadka dhimirka inuu ka hadlo.
Haddaba xasuusnoow, mararka qaarkood cawsku kuma filna in uu na geeyo dhinaca kale ee caqabadaha ugu waaweyn ee nolosha. Geedku dib uma noqon karo waqtigii hore oo dib uma celin karo maskaxdeena mana tirtiri karo dhaawaceena.
Weed waa qalab cajiib ah iyo saaxiib dhab ah marka daawooyinka dawooyinka aan la heli karin - iyo mararka qaarkood xitaa marka lagu daro daroogooyinka. Laakin mararka qaarkood waxaa loo baahan yahay dawooyin dhakhtar soo qoray, taasna ceeb ma leh. Waxa jiri kara dhawr waxyaalood oo isku mar socda. Iska ilaali caafimaadka maskaxdaada.
Waxa laga yaabaa inaad ka hesho xasillooni cusub oo ah noocyada sigaarka ee dhibaatooyinkaaga gaarka ah, la hadalka khabiirka caafimaadka dhimirka, iyo qaadashada daawo yar. Waa mudnaan in aad haysato lacag iyo wakhti aad naftaada ugu maalgeliso habkan, hana ka xishoon inaad caawimo raadsato.
Isticmaalka xashiishadda waxay noqon kartaa qayb muhiim ah oo ka mid ah is-daryeelkeena, laakiin bini'aadam ahaan waxaan mararka qaarkood u baahanahay wax ka badan hal shay si aan u wanaajino caafimaadkeena maskaxeed. Talooyinkani waa bar bilow. Inta kale ee safarkaaga caafimaadka dhimirka ayaa ku sugaya marka aad diyaar u tahay inaad bilowdo.
Ilaha ay ka mid yihiin EverydayHealth (ENCaafimaadka Maskaxda Rajada (EN), Leafly (EN)
Cannabis inta lagu jiro daawaynta kansarka naasaha: waa maxay...
Thailand waa waddankii ugu horreeyay ee Aasiya ah ee…